Shina simenitra Silo fanamboarana sy orinasa | Jusheng
Silo vita amin'ny simenitra azo sintomina
Valizy lolo ho an'ny simenitra Silo
Simenitra vovoka simenitra
Simenitra Silo Accessories
Simenitra Silo Auger
Silo fitehirizana simenitra
Silos simenitra azo entina
Silo ao amin'ny orinasa simenitra
Ireo silo simenitra, antsoina koa hoe tanky simenitra, dia azo zaraina ho silo simenitra misaraka sy silo simenitra tsy miharo volo. Ny silo Split amin'ny ankapobeny dia mety amin'ny fitaterana kaontenera hitsinjovana ny vidin'ny fitaterana sy ny tsingerina. Ny simenitra dia ampiasaina miaraka amin'ny zavamaniry fampifangaroana beton, ary ny mpampiasa dia manolo ny silo simenitra amin'ny habe sy habe samihafa arakaraka ny fivoahan'ny zavamaniry mifangaro. Izy io dia iray amin'ireo ampahany lehibe amin'ny zavamaniry mifangaro. Ankoatry ny fitehirizana simenitra dia afaka mitahiry fitaovana be dia be koa izy, toy ny lalitra manidina, voamaina madinidinika, fotaka maina, voamaina, sns. Ny silo dia tsy manana afa-tsy ranonorana, tsy misy hamandoana ary mora ampiasaina. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny valves lolo, conveyor visy, tanan'akanjo mifangaro malefaka sns, mba hitaterana fitaovana avy amin'ny silo mankany amin'ny siny fandrefesana. Amin'ny ankapobeny ny silo dia misy mpanangona vovoka sy valizy famotsorana tsindry. , Fatra haavo haavo avo sy ambany, fantsom-panafody fanampiana, loaka valizy lolo vavahady, fitaovana sivana ary kabinetra fanaraha-maso. Fitaterana voaisy tombo-kase mba hiantohana ny tontolo iainana tsy misy vovoka.
Model No. fahafahana Savaivony Silo Haavon'ny Silo Haavo ny famoahana
Soso-kevitra momba ny fisafidianana
Modely Silo Fahaizan'ny zavamaniry Qty isaky ny zavamaniry
Ny silo simenitra dia vita amin'ny orinasa vy Q235 hitehirizana ny simenitra. Izy io dia manana karazany roa, silo mivezivezy & Silo mifangaro, ny fahafahan'ny silo dia avy amin'ny 30t-1000t.
Ny silo simenitra dia misy ireto manaraka ireto: sambo fiara, sehatra fikojakojana, vatan'ny tanky, tohatra, mpiambina, fantsom-pamokarana, mpamory vovoka tafo silo, valizy famotsorana tosika, fatra ambony sy ambany, fantsom-bokotra fanampiana, fanamoriana valizy lolo vavahady, fitaovana sivana Ary mifehy kabinetra
Flake Trano fitobiana simenitra
1. Ny silo simenitra mitete dia mora apetraka ary foanana.
2. Azo fonosina sy entina mora foana.
3. Fampisehoana famehezana matanjaka.
4. Fisehoana tsara tarehy.
Fametrahana: Ny silo simenitra dia misy takelaka vy, izay ampifandraisin'ny bolt, izay tena mora ny mivory sy manala azy. Ireo mpiasa za-draharaha dia afaka mamita ny fametrahana ny silo simenitra amin'ny alàlan'ny horonan-tsary fametrahana na torolàlana fametrahana.
Fahaiza-manao: ny silo simenitra bolt dia azo ampiasaina amin'ny 50 taonina, 100 taonina, 200 taonina, 300 taonina, 500 taonina, 1000 taonina. Ny habe farany dia natao arakaraka ny tontolo iainana eo an-toerana sy ny takiana ao an-toerana, noho izany ny vahaolana silo simenitra tsirairay dia tokana ho an'ny mpanjifa.
raha manana fanontaniana ianao,Mifandraisa aminay: sales@dongkunchina.com
Integral Silo Product Interoduction
1. Ny fiara mifono simenitra dia matetika ampiasaina ho toy ny vokatra manohana ny zavamaniry (trano) mifangaro.
2. Mety amin'ny famenoana simenitra betsaka sy lavenona manidina maina izy io. Izy io dia manana ny mampiavaka ny orana, ny hamandoana ary azo ampiasaina mora foana; ny famaritana sy ny refy dia azo atao arakaraka ny takian'ny mpanjifa ihany koa.
3. Amin'ny ankapobeny dia rafitra fanohanana varingarina izy io, miaraka amin'ny fitaovana fanesorana vovoka eo amin'ny tapany ambony hisorohana ny fivoahan'ny vovoka, ary fitaovana famakiana andohalambo eo amin'ny faritra ambany mba hisorohana ny vovoka amin'ny fampitomboana sy hahatonga ny vovoka hampidina tsara. Izy io koa dia fitaovana miaraka amin'ny fitaovam-pandrefesana ara-materialy, izay azo fehezina amin'ny fotoana rehetra. Fampiasana fitaovana.
4. Amin'ny ankapobeny, kamio mpanera simenitra marobe no ampiasaina handefasana ny lasantsy vovoka ao anaty silo; araky ny firafitry ny silo simenitra dia misy fomba roa matetika amin'ny famoahana ilay fitaovana, ny iray dia ny mampifandray ny faritra ambany amin'ny mpampita visy, ary ampiasao ny mpampita halatra handefasana ny vovoka ao anaty vovoka. Ny faharoa dia ny fampiasana fampitana pneumatika (ho an'ny fiara mifono simenitra misy rafitra manokana).
5. Ny silo simenitra dia manana rafitra tsotra, fametrahana mora, toerana kely misy gorodona, fampiasam-bola ambany, fivezivezena matanjaka, sns.
6. Ny silo simenitra bolt dia azo ampiasaina amin'ny 50 taonina, 100 taonina, 200 taonina, 300 taonina, 500 taonina, 1000 taonina. Ny habe farany dia natao arakaraka ny tontolo iainana eo an-toerana sy ny takiana eo an-toerana,
Rafitra fanangonam-bokatra mandeha ho azy, Masinina mitambatra mandeha ho azy, Concrete Mixer Spare Parts, Rafitra fanangonana mitambatra, Fitaovana fampiroboroboana zezika mandeha ho azy, Rafitra fanangonam-bokatra mitambatra,